Anyị na-agwa gị n'ụzọ miri emi etu esi eji igwe ocha ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Oge Obere: Ihe a bu ihe ichoro ima banyere smartwatch ohuru
Ọ bụ Luis del Barco | | smartwatch
O ruola ụbọchị ole na ole kemgbe anyị cheere 16:00 ka anyị hụ Pebble ọhụrụ. Dị ka leaks, elekere ahụ ga-enwe agba agba na arụmọrụ ọhụrụ. Naanị ụnyaahụ otu nke ha kwuru ga-abụ ihe doro anya nke ihe anyị ga-ahụ kwupụtara taa agbapụrụ, na otú a ka ọ di.
N'oge, na 16: 00 pm n'ehihie a, anyị enweela ike ịhụ ọhụụ ọhụrụ nke Pebble maka afọ a: nke Obere oge. Agbanyeghị, etiti nlebara anya maka elekere a abụghị na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ, mana ha kpebiri ịlaghachi na mmalite ha, yabụ ha laghachi Kickstarter na mkpọsa nke, awa abụọ mgbe ịmalite, ọ dịlarị ụzọ ya ruru nde dọla 4 etolitere.
1 Otu Pebble ochie ahụ, ma dị iche
2 Gara aga, ugbu a na ọdịnihu
3 Gafee nyiwe
4 Ihe ị kwesịrị ịma
5 Nye ọnụahịa na nnweta
Otu Pebble ochie ahụ, ma dị iche
Ọhụrụ a nche na-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi na otu n'ime àgwà ndị mere ya kasị ama: ya kọmputa ink ihuenyo. Ọ na-achọsi ike ịhụ otu, n'ahịa ebe ụlọ ọrụ ndị isi ụlọ ọrụ na-agba mbọ ịmalite ngwaọrụ na teknụzụ dị elu (ruo na ihuenyo), site na Pebble ha na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ụdị ngebichi a nwere obere ma ọ bụ ihe ọ bụla ịme. ya na ndi ozo. N’agbanyeghi, n’oge a, ọ dị na agba.
Ọ dabara nke ọma, nke a dị iche iche dị iche iche bụ omume ọma kasịnụ, ebe ọ bụ na ihe niile efunahụ na ihuenyo, enwetara na batrị. Ọnọdụ anyị ugbu a na-eme ka anyị dabere na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ikike ha nwere oke, yana ịnwe ụgwọ ọzọ na njedebe nke ụbọchị nwere ike bụrụ ihe kpatara ịghara ịzụta smartwatch ahụ anyị chọrọ. Na Pebble ha maara na nnwere onwe dị ezigbo mkpa maka ndị ọrụ, ọ bụ ya mere nche ọhụrụ a na-echekwa ụbọchị asaa nke ndụ batrị nke onye bu ya ụzọ.
Ikpeazụ, presente na ọdịnihu
A smartwatch ga-adabere na arụpụtaghị ihe, ọ gaghị abụ ihe na-egbochi anyị, ebe ọ bụ na ọrụ ya bụ na anyị nwere ike ime ihe n'ụzọ ọsọ ọsọ karịa ka anyị na-eji iji ekwentị anyị eme. Jikwaa ọtụtụ ozi na obere ngebichi dị otú ahụ O nwere ike ịbụ ihe na-emenye ụjọ, ha makwaara ya.
Site ugbu a gawa, Pebble ga-agụta a ọhụrụ interface lira ihe usoro iheomume nke ga-ekewa omume ndị anyị na-arụ na ngwaọrụ ahụ na-agbaso usoro iheomume usoro na usoro oge. N’ụzọ dị otu a, anyị ga - amata ozi email dị iche iche echefuru nke ọma n’ụtụtụ a, ọ bụrụ na mmiri na - ezo ugbu a ma ọ bụ nkwa dị a weaa anyị nwere n’abalị a.
Dịka m kwuru na mbụ, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ teknụzụ na-ewepụta ụdị nke smartwatches ha. Na oge ọ bụla ha ga-adịkwu. Na-esote nnukwu nhọpụta na ụwa nke smart ese ga-abụ na April, mgbe Apple ga ẹkedori a Apple Watch nke a na-enye ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka ya kemgbe ọkwa ọkwa ya na Septemba.
Ma Pebble nwere ihe ndị smartwatches ndị ọzọ na-asọ mpi adịghị. Ihe na - eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na ndị ọrụ nwere ekele. Ebe ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka nkà na ụzụ na-ahụ usoro ọrụ onye iro, Pebble hụrụ enyi ọhụrụ. Agha ebighi ebi n'etiti iOS na gam akporo bu nkwekorita maka elekere mgbasa ozi a, nke pụtara na ọ bụrụ na oge ụfọdụ anyị agbanwee Samsung anyị maka iPhone, ma ọ bụ na ntụgharị ihu, nche anyị kwesịrị ntụkwasị obi ga-enwe ike ịga n'ihu n'akụkụ anyị.
Ihe ị kwesịrị ịma
A na-atụgharị eriri Pebble na ụdị 22mm ọ bụla ma nwee ike dochie ya.
O nwere nguzogide mmiri.
O wuru-na vibration maka ificationsma Ọkwa.
usoro iheomume Ọ ga-adịkwa na ụdị Pebble gara aga.
Igwe okwu jikọtara ọnụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịnweta otu n’ime nche ndị a, anyị na-adụ gị ọdụ ịme nke a tupu Machị 27, ụbọchị mkpọsa Kickstarter na-akwụsị. Retagwọ ọnụahịa ikpeazụ nke Pebble Time ga-abụ 199 dollar, yabụ ọ bụrụ na ịzụta ya site na mkpọsa ọ ga-adị ọnụ ala.
Mgbe mbido puku iri mbụ nke "mbido nnụnnụ" rere na $ 10.000 kwa otu, ugbu a enwere ike inweta oge Pebble malite na $ 179 (dịtụ ọnụ ala ma ọ bụrụ na anyị azụta ọtụtụ n'otu oge). A ghaghi itinye ego a na mbupu ugwo, nke na-amalite na $ 10 mgbe ị na-enye iwu maka otu ma nwekwuo dollar ole na ole ma oburu na mbufe di elu.
Kedu mgbe anyị ga-amalite ịnụ ụtọ smartwatch anyị ma ọ bụrụ na anyị zụta ya ugbu a? N'ihi na nnukwu ina ha na-enwe, ese ga-ebido rute ndị nwe ha n’ọnwa Mee na-abịa.
Obere oge Pebble mgbasa ozi na Kickstarter
Nnwere onwe nke ruru otu izu
Obere ohuru imewe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Oge Obere: Ihe a bu ihe ichoro ima banyere smartwatch ohuru
5 Nhọrọ iji kpọchie ma ọ bụ gbanyụọ ma keyboard na òké na Windows
New Fujifilm FinePix XP70, kọmpat maka iji ụdị ọnọdụ ihu igwe niile